यस्तो बेला उपचार छोडेर आन्दोलन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई हामी पनि हेरौंला! – Health Post Nepal
२०७७ मंसिर ९ गते १९:१३
कोरोना संकटकैबीच दैनिक जसो स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न समस्या लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
वीर, भक्तपुर अस्पताल लगायतका केही स्वास्थ्य कर्मचारीको तलव तथा जोखिमभत्ता नपाएको गुनासो उनीहरुको छ।
केहि दिन अघि स्वास्थ्यकर्मी २० संगठनले १८ बुँदे माग राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो।
कोरोनाको महामारीमा बिरामीको उपचार गर्न छोडेर स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल अनि मन्त्रालयमा धर्ना दिने अवस्था किन आयो?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमसँग हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईं यस्तै केही प्रश्न राखेका छन्।
कोरोना महामारीमा उपचारमा खटिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल र मन्त्रालयमा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था किन?
सबैभन्दा पहिला त कोरोना भाइरसलाई नबुझेर यो समस्या आएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोभिड के हो र कस्तो समस्या हो भनेर बुझेनन्।
यस्तो बेलामा धर्ना, जुलुस गर्नुपर्ने भन्दा काम खुरूखुरू गर्ने र कोभिड पराजित गरेपछि अनि आ–आफ्ना भाग कति हो खोज्ने हो।
नेपाल सरकारले गर्न सक्ने त गरेकै छ नि! काम नगरे पछि पैसा आएन। कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा पैसा पनि आएन होला। कतिपय नेपाल सरकारका कर्मचारी होलान्। स्वास्थ्य तिरका नेपाल सरकार कर्मचारीलाई कोभिड नहेर पनि भत्ता चाहियो भन्ने माग छ। त्यो सरकारले दिन सक्दैन।
कोभिडको उपचार नगरी कोभिडको भत्ता कहाँबाट पाइन्छ र?
कतिपय ठाउँमा हामी कोरोनाका बिरामी हेर्दैनौ। हाम्रो कोभिड संस्था होइन भनेर बिरामी हेरेनन्। पैसा आएन स्वास्थ्य संस्थालाई। नन कोभिड आउँदा पनि कोभिड होला भनेर हेरेनन्। त्यसो हँुदा पनि पैसा आएन। अस्पताल समितिको कर्मचारीको लागि तलब—भत्ता आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो।
स्वास्थ्यकर्मीहरू जोखिम भत्ता, तलवजस्ता विषय लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, यस्ता व्यवहारिक कुरा पनि मन्त्रालयले किन मिलाउन नसकेको?
नेपाल सरकारको लागि जोखिम भत्ता र तलव दिइरहेका छौँ। सरकारी तर्फका कर्मचारीले नपाएको भन्ने कहीँ कतै रेकर्ड छ र?
नेपाल सरकारका कर्मचारीले तलब, जोखिम भत्ता नपाएको भन्ने कहीँ गुनासो छैन। जसले कोभिड बिरामी हेर्छ, त्यसको संख्याको आधारमा जोखिम भत्ता दिन्छौं, दिइरहेकै छौं।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आइसियुमा राखेको बिरामीको लागि १५ हजार, सिरियस बिरामीको हकमा प्रतिदिन ७ हजार, सामान्य बिरामी ३ हजार ५ सय दैनिक प्रतिव्यक्ति तिरिरहेको छ।
निजी अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर चकाचक अस्पताल चलाएर नाफा पनि गरेका छन्। जस्तो मनमोहन, कान्तिपुर, मेगा अस्पताल आदिले त्यही पैसाको भरमा चलाइरहेका छन्।
सरकारी अस्पतालमा हामीले त्यहीँ हिसाबले पठाउने हो। वीर, पाटन, टिचिङ, प्रसुति, कान्ति आदि अस्पतालमा बिरामीको संख्याको आधारमा पठाउने हो।
दैनिक बिरामीको उपचार पाएको रकमबाट नै पिपिई किन्ने तथा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिने हो।
हरेक महिनाको ७ गते सबैको जोखिम भत्ता अस्पतालमा पुर्याइएको छ। कोभिडको बिरामी हेर पो त जोखिम भत्ता आउँछ।
वीर अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने हामीले पठाएको पैसा अन्य नै शीर्षकमा खर्च त्यहाँको व्यवस्थापन खर्च भएको जानकारी गराउनुभएको छ।
अब, व्यवस्थापन गर्नुहोला।
कसैले केही काम गरेन हामीले दिने कुरा भएन। कुनै स्वास्थ्य संस्थामा कोभिडका बिरामी भर्ना भएका छन् भने बिहान १० बजे हामीले हेरिसकेका हुन्छौं, आज कहाँ–कति बिरामी छन् भनेर।
जुन अनलाइन सिस्टममा हुन्छ।
२० वटा स्वास्थ्यकर्मी संगठनका विभिन्न मुद्दा लिएर मन्त्रालयमा पटक–पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका छन्। उनीहरूका समस्या विषयमा मन्त्रालयले कुनै चासो दिदैँन भन्ने आरोप छ नि?
कतिपय कुराहरू उहाँहरूको जायज पनि रहेका छन् होलान। सबै माग नजाय छन् म भन्दिैन। तर, यो यस्ता माग राख्ने बेला र मौसम ठीक भएन।
जनताले केही पनि पाएका छैनन् नि। कर्मचारीले तलब त पाएका छन्। बिचरा जनताले कोभिडको यस्तो महामारी छ। बिहान—बेलुका के खाउँ, के लगाउँँ भन्ने अवस्था छ। यस्तो बेलामा घरमा चुल्हो बल्ने कसरी हो भन्ने भएको छ। अनि यस्तोमा धेरै माग नगर्नुपर्ने हो।
मानिसहरूलाई अनुभव पनि छैन। कोरोना पनि नयाँ रोग हो। त्यो लेबलमा उठेर विचार गर्नुभएको छैन होला।
कतिपय स्वाभिवक पनि छन्। कतिपय अस्वाभिवक माग पनि छन्।
माग पूरा नभए उपचार गर्न छोडर आन्दोलनमा उत्रिने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन पहल नगर्ने त?
यो टेन्ड्र ठीक होइन।
आन्दोलन त गरेको ग¥यै हो? स्वास्थ्यमा आन्दोलन गर्यो भने त भोलिपल्ट के हुन्छ हेरौंला नि हामी पनि!
स्वास्थ्यमा आन्दोलन, जुलुस, धर्ना सम्भव छैन।
चेतावनी दिन त पाइन्छ नि! तातो तताएर नुहाउँछु भन्यो, नभए चिचो पानीले नुहाउँछु भन्न पनि पाइन्छ नि।
स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचार नगर्दा भोलि घर–घरमा गएर थुतेर निकाल्लान् जनताले फेरि। जनताले उपचार पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकार हो। अनि,
स्वास्थ्यकर्मीले जुलुस, हड्ताल गर्छु भनेर कहाँ हुुन्छ। त्यति सम्म उहाँहरू जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
माग त राख्नै पर्यो नि! स्वास्थ्यका त्यति धेरै संगठन छन्। नत्र, संगठन कसरी चल्ने?
अर्को संगठन भन्दा मेरो संगठन राम्रो हो भन्नको लागि पनि केही केही काम त गरिराख्न पर्यो नि!
हड्ताल, जुलस नै गर्नुहुन्छ भन्ने गैरजिम्मेवार बन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन। किनभने त्यहाँ संगठनमा हुनुहुने धेरै मानिस मैले चिनेको छु।
7 thoughts on “यस्तो बेला उपचार छोडेर आन्दोलन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई हामी पनि हेरौंला!”
Because of such sick mentality of leaders, Nepal is no place for healthcare workers.
khumraj sharma says:
डा. जागेश्वोर गौतम लाई मेरो प्रश्न छ संघीय अस्पत्ताल मध्य कुन कुन अस्पताल लाई covid भत्ता दिनु भयो र त्यहा का कति जना front liner स्वास्थ्य कर्मी ले 100% covid भत्ता पाए र तपाईं हरु ले त्येस्को कति % fallowup गर्नु भयो पाएकाले कति पाए र नपाएकाले किन पाएनन मन्त्रालय ले गर्नु पर्ने थियो के गर्यो र मन्त्रालय मा बसेर स्वास्थ्य कर्मी को लागि मैले के गरे भनेर स्पष्टीकरण दिनु पर्छ भन्ने कुरा याद गर्न जरुरी छ ।
dear Khum,Health professional just attending the hospital or working in different hospital, staying at home are not really fron liner. those working in emergeny, isolation ward , covid ward they are front liner and only they should get the allowance. Money from government in public money it should not be paid rampantly. Other health professional should not be paid.
वहाँ प्रसुतिकर्मी हो, जन स्वास्थ्यकर्मी होइन। वहाँले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिसदमा दर्ता नभई यि सब काम गर्नु भनेको बिना लाइसेन्स गाडी चलाएजस्तो (गैर कानुनी) काम हो।
कोरोना रोग भन्दा ठूलो राजनिती र व्यापार भएको कुरा नबुझेको होइन, यो वहाँ जस्तै गैर जनस्वास्थ्यकर्मीको सिन्डिकेट हो।
भोलिको दिनमा नेपाल सरकारमाथी गैर जनस्वास्थ्यकर्मीलाई आफ्नो काम गर्न नदिई जन स्वास्थ्यको काममा खटाएको र जनस्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्न नदिएको आरोपमा पर्ने मुद्दाको उत्तर वहाँ सँगै नेपाल मेडिकल परिसद, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिसद, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतले कसरी दिन्छ प्रतिक्षा गरौं
स्ले जस्लाई जे भने पनि आफुलाई ऐना नहेर्ने बानि। डा जगेस्वर ज्यु का धेरै कुरा भित्र यथार्थ भए पनि वहा कार्बाहि गर्न सक्नु हुन्न किनकि मेरो देशमा राज्य, कानुन, नियम निर्देशिका भन्दा पनि बलियो ट्रेड युनियन हरु छन। बिभिन्न कुरोमा मोल मलाई गरिखाने ट्रेड युनियन रहुन्जेल कुनै कुनै पनि सन्स्थान ,योजना दिर्घकालिन बन्न सक्दैनन। गाइले दुध दियन भने थुन काटेर खाने किसिम्का छन ट्रेड युनियन का नेताहरु।
जोखिम बिना को स्वास्थ्य सेवा हुनै सक्दैन। यो पढ्न जादा त्यो नभए पढ्दै गर्दा सबैले बुझि सकेको हुन्छ।जोखिम नलिने स्वास्थ्य कर्मिले स्वाश्थ्य सेवा दिननै सक्दैन। जोखिम् भत्ता नपाइ काम् गर्दिन भन्नु, काम नगरि जोखिम भत्ता माग्नु गलत हो । काम नगरि हड्ताल जुलुस गरि बिरामिको मनसिक असर् पार्ने, सेवा प्रभाब पार्ने कर्मचारि लाई निलम्बन गरि जेल हाल्नु पर्छ। नेतागिरि गर्ने, नक्कलि बिल बनाई खाने, झुटो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाई पेस गर्ने खटाएको ठाउमा नजाने यस्ता लाई कार्बाहि गरि जेल् हाल्नु पर्छ्।
LeaveaReply to khumraj sharma Cancel reply